Soo dejisan Battery Doctor 5.9 – Vessoft
Soo dejisan Battery Doctor
Battery Doctor – software ah in ay economize iyo isticmaali la’aan batteriga dheeraad ah saar. software The kuu ogolaanayaa inaad si loo ogaado xaaladda ay iminka iyo waxqabadka of batteriga ka hoos ugu rarataan culaysyo kala duwan. Battery Doctor ayaa tiro ka mid ah hawlaha si ay dami codsiyada aan waxtar lahayn, khasnado nadiif ah oo dami geeddi asalka. software The awood si aad u eegto tirakoobka ee isticmaalka tamarta batteriga oo ka mid ah codsiyada iyo muddo qalabka qaliinka markii Wi-Fi iyo module GPS yihiin ineysan. Battery Doctor kale oo ku jira widget ah oo kuu ogolaanaya in aad si aad u bilowdo mid ka mid ah awoodda hababka mooyee iyo qabsadaan goobaha kala duwan ee qalabka.
Ka hortagga isticmaalka tamarta xad-dhaaf ah
Falanqaynta ka mid ah gobolka iyo hufnaan hawlgalka batteriga
Monitoring of heerkulka oo ka mid ah batariga iyo processor
awoodda kala duwan hababka mooyee
Battery Doctor Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Outlook 1.3.17
العربية, English, Français, Español... WeChat 6.2.5.52